Dzidziso: Gadzira LiveUSB ine iyo terminal | Kubva kuLinux
Dzidziso: Gadzira LiveUSB ine Terminal
chivindi | | Kugoverwa, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Kune nzira dzakasiyana dzekugadzira LiveUSB muLinux, imwe yacho ndeye kushandisa Unetbootin, iyo KZKG ^ Gaara yagadzira Tutorial nguva refu.
Imwe nzira yekuzviita ndeye neiyo terminal, nenzira iyi hatisi kuisa zvidiki zvirongwa kana chorraditas izvo zvavanoita kutora nzvimbo pane rakaomarara diski.
Kana tangove neiyo ISO kurodha pasi, chinhu chekutanga chatinoita kuisa iyo folda patinayo iyo ISO ine terminal.
kana (kana iyo fomu ikatipa kukanganisa)
Pane imwe nguva ipapo tinoona runyorwa rwefaira kuratidza kuti hatina kukanganisa faira.
ye = / dev / sdb Iyo nzira yeiyo USB kifaa kazhinji saka usati wachinja ini ndinokurudzira kuyedza seizvi, kana zvikasashanda isu tatochinja iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Dzidziso: Gadzira LiveUSB ine Terminal
Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekugadzira live-usb. Inokurumidza uye inoshanda kupfuura chero graphic chishandiso.
pd: Ndine hurombo nekunyora zvinyorwa, xD.
Nekuve kekutanga ini ndichakuregerera asi nguva inotevera paunoenda wakananga kuRAE hahahahaha
Mumwe mubvunzo: neiyi nzira iwe watove neiyo live-usb ine bhuti sarudzo (grub kana lilo) yakaiswa nenzira imwecheteyo seiyo iso ye cd / dvd? Ini ndinokubvunza kuti nei dzimwe nguva ndakazviita uye pandakazvitsiva patsva chakakanda grub kukanganisa, uye pakupedzisira ndaifanira kupedzisira ndoshandisa unetbootin ... iyo inongoshandisa syslinux.
Ndakambozviedza asi zvakaitika kwandiri ndezvekuti komputa yakanga isina mukana wekubhura kubva kuUSB kana kuti ini ndaisaziva maitiro ekuigadzira muBIOS.
Kunyange zvakadaro ndinofungidzira hongu asi handigoni kuzvisimbisa
Bios haina kunditangira kubva ku-live-usb futi, uye haigadziriswe.
Ini ndawana iyi (boot maneja) http://www.plop.at, iyo inongopisa iyo cd uye inobvumidza kubhowa kubva kuUSB.
Plop yakanyanya kuoma kumisikidza, ini ndaitofanira kuishandisa kamwe uye hapana, ini ndaisakwanisa
Ini ndakangozvinyora pacd uye nekungobhurawuza kubva kuiyo cd iwe unogona kubhuroka kubva kune usb
Zvakanaka saka zvinofanirwa kunge zviri kuti mukati mePlop mune akasiyana akasiyana uye ini ndakaenda kunotora yakanyanya kuoma
Izvi zvinongoshanda chete kana iyo iso ikauya yakagadzirirwa bhuti kuburikidza neUSB, zvikasadaro unofanirwa kuita mamwe matanho.
Semuenzaniso, iyo yekupedzisira nguva yandakaedza kuita izvi nematanho ekuwedzera matanho aidiwa (ini handina kuyedza yazvino vhezheni), zvakafanana neyokutanga arch iso's.
Javier Fonseca akadaro
Ndeapi mamwe matanho anodiwa? Ndine dambudziko iro.
Pindura Javier Fonseca
Zvinogona kubatsira vazhinji vedu, kuziva zvaunoreva nekuita shanduko kune izvo zvemifananidzo yeiso iyo munhu anoda kugadzira bootable usb, unogona kunyatsoona kuti maficha senge Unetbootin anoita shanduko mufaira chimiro zvichikonzerwa kuitiswa kwayo panguva yekuvaka bootable usb.
Parizvino ini ndinoshandisa Unetbootin kurodha ziso rangu pane USB, ndisingashandise DD yakanyatso kusiya zvakawanda kuti zvidikanwe nekuti ndakayedza iyo pasina mumwe mhedzisiro kunze kwekutadza kwakakomba musangano reUSB.
Iyi nzira yakanaka kana isu tine hybrid uye isu tinoziva kuti nekunyora mune terminal, isohybrid kero yeziso
Kana isiri yemasanganiswa haiwanzo shanda, semuenzaniso zvakaitika kwandiri neziso re lmde, imwe yedhiian solid uye imwe ye bsd.
Ndinofunga wakarurama. Kune rumwe ruzivo nezve hybrid ISO mifananidzo munharaunda dot linuxmint dot com / tutorial / view / 744 uye wiki dot geteasypeasy dot com / Hybrid_ISO / IMG_format
David Segura M akadaro
Ini ndinowanzo shandisa nzira iyi kune isos iyo inondipa matambudziko ndichishandisa zvakajairika kunyorera, senge OpenSUSE
Pindura kuna David Segura M
Mhoroi, ini ndinoedza kuisa winxp kubva kuUSb ine ubuntu, ini ndinogadzirisa iyo bios kutanga kubva inobviswa hd (iyo sarudzo yekutanga kubva kuUSb haioneke, pandakaisa ubuntu yakaonekwa) iyo pc yakavhurwa uye kana zvichiratidzika kuti kuiswa kwe xp kuri kutanga ini ndinowana 2 uye nekubwaira kwedhishi. Kubva ipapo hazviitike.
Ini ndoda kuchinjira ku xp zvakare nekuti ini handisi kujekesa neUbuntu uye ndiri kupenga!
Ndinokutendai zvikuru pamunofunga.
Gamuchira Oscar (Imwe yeunganidzwa: D):
Ndinokurudzira kuti iwe uende kuforamu yedu kuti uwane rubatsiro rwuri nani 😀
Kana iwe uchiziva nzira uko iyo iso iri, iwe unofanirwa kungoita:
dd kana = / nzira / ku / file.iso ye = / dev / sdX
Uye, sezvo dd isingaratidze kufambira mberi, kana tichida kuona kwazvinoenda, tichiita izvi, tinogona kuzviita:
Iine dd_rescue kana ichiratidzira kufambira mberi kubhawa, mune iyo openuse wiki kutanga kwaive nenzira ne dd, vakabva vaichinja kuita dd_rescue
Zvirinani muDebian kwete
Inonyanya kubatsira c:
Pindura ku -Camaleon-
Iwe zvakare unofanirwa kuongorora iyo usb nzira ne fdisk -l
Kutenda kuzhinji!! Ini ndaisa Debian 8 neLXDE uye ndiri kuva nezvikanganiso, ini handina kukwanisa kuisa Unetbootin uye ini ndanga ndisisazive maitiro ekugadzira LiveUSB, nekuda kweizvi ini ndichakwanisa kudzorera OS
Ini ndinokumbira ruregerero kunemi mese nezvandichataura, asi iyi dzidziso yangu anodikanwa blog blog. Kubvalinux.net, ndeye FAKE, saka yakaipa FAKE nekuti semamwe mapeji mazhinji, blog vhidhiyo tutorials, ivo hapana chavanoita asi kudzokorora chimwe chinhu Chakaipa, ndinonyatsovaudza kuti vaedze uye ndakaedza zvakare kutarisa nekutarisa, asi ini ndakangoona kukundikana mune maitiro nekuti mushure mekuita matanho ese akatsanangurwa pano…. Nekuda kweizvozvo, ini ndakawana kopi yezvirimo ziso risingashande kana raitwa muUSB, rinofanirwa kugadzirwa kubhutsu, uchishandisa GRUB kana LILO, kana syslinux (kana dzimwe nzira dzandisingazive chokwadi izvo zvinoita kuti tiite boot kubva kuUSB.
Ndosaka ndichikurudzira kune vese vaverengi, kana vakashandisa linux kana windows, shandisa Unetbootin iyo ichaita zvese zvandinotaura pamusoro, kwete chete kuteedzera zvirimo ziso kune usb asi zvakare zvinoita kuti ibhutswe (zvinova izvo zvavakakanganwa kutaura kuvadzidzisi vedu.)
Shamwari, izvi zvinoshanda, nekuti pabasa rangu ndinoita LiveUSBs kazhinji nenzira imwe chete iyi. Unetbootin inoita kuti basa rive nyore ASI, harishande zvakanaka kana zvasvika kune Ubuntu.
Ndatenda KZKG ^ Gaara nemafungiro ako, chokwadi ndechekuti ndakaedza kakati wandei, kuyedza kuzviita naCraunchBang, Debian, Slax, uye kali, chokwadi ndechekuti pasina kana ini ndaigona kuzviita, nenzira iyi, kupfuudza zvese zvemukati kubva kuiso kuenda kuUSB uchishandisa iyo DD application.
Ngirozi lavin akadaro
mhoro, hesi dzimwe nguva hazvishande, nei izvozvo zvichiitika?
Pindura Mutumwa Lavin
ONA: Pakutanga maitiro iwe haufanire kubvisa iyo unit, vhara iyo terminal kana kuipedza usati wapedza nekuti inogona kuikuvadza.
Julio Hernandez akadaro
Kune vatangi vakaita seni, muUbuntu 20.04, unofanirwa kuwedzera rairo "sudo" kuti ishande, kuitira kuti iwo wakazara kuraira utaridze seizvi
sudo dd kana = isoname.iso ye = / dev / sdb
Zvakanditorera maminetsi mashoma kuti ndipedze, asi zvinoratidzwa ... maita neako maitiro shamwari!
Pindura kuna Julio Hernández
Dropbox kana Sparkleshare?
Yakanakisa Linuxero Desktop (Ndira / 12)